နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိဆေးဝါးပညာရှင်များ(Pharmacists)ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဟာ အထူးသဖြင့် ဆေးဝါးများကိုလူနာဆီထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ပြုတဲ့အခါ(the right to dispense medicine) အချေအတင်ပြင်းထန်စွာ ဆွေးနွေးရတဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ သူတို့ကိုလိုလားတဲ့အုပ်စုနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့အုပ်စုနှစ်ခုလုံးမှာ ငြင်းခုံမှုကိုယ်စီရှိကြပြီး လတ်တလောအနေအထားအရ မကြာမီတဟုန်ထိုးတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာစရာအကြောင်း ရှိနိုင်မယ်မထင်ပါ။ သို့သော်ငြား pharmacyဆိုတာ ရှေးအစဉ်အဆက် ဆေးဝါးများကိုကိုယ်တိုင်ဖော်စပ်ရောင်းချသူ (apothecary)ခေတ်ကတည်းက ရှည်လျားလှတဲ့သမိုင်းရာဇဝင်ရှိသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှ pharmacistsတွေအတွက် ကမ္ဘာတခြားဒေသအရပ်ရှိ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆွေတော်ရောင်းရင်းတွေ ဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာ တစေ့တစောင်းအကဲခတ်စရာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
Posted by San Yin Mon at 3:25 AM No comments:
သင်သွေးပေါင်ချိန်ကို မှန်ကန်စွာတိုင်းတတ်ပါသလား။ သွေးတိုးရောဂါလားဆိုတာကို ရောဂါအမည်တပ်ဖို့နဲ့ ကုသဖို့ တိကျတဲ့သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတတ်ဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပိုမိုတိကျတဲ့သွေးပေါင်ချိန်ဖတ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် တိကျတဲ့အတတ်ပညာနဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအစုံကို ကောင်းမွန်စွာပြုစုထားပါတယ်။
သို့သော် ဆေးပညာလောကသားများဟာ အဆိုပါလမ်းညွှန်ချက်များကို အပြည့်အဝလိုက်နာခြင်းမရှိကြောင်း သုတေသနလေ့လာချက်မှာ တွေ့ရပါတယ်။ လူနာတယောက်အနေနဲ့ သင်လည်း သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို လိုက်နာ၊မနာကို ဆုံးဖြတ်တတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Posted by San Yin Mon at 7:59 AM No comments:
Photo(Credit from http://www.globalnewlightofmyanmar.com)
မန္တလေးရွှေမြို့တော်ကြီးဟာ ယခင်ကနဲ့မတူဘဲ အစစအရာရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါတယ်။လမ်းများကို တိုးချဲ့ဖောက်လုပ်ကာ စနစ်တကျကတ္တရာလမ်းမကြီးခင်းကျင်းထားပြီး ရေဆိုးထုတ်စနစ်ကိုလည်း လမ်းမများမှာ အခိုင်အမာကွန်ဂရစ်သံများနဲ့ ဖောက်လုပ်တပ်ဆင်ထားတာကြောင့် မိုးကြီးပါက ရေကြီးရေလျှံခြင်းမရှိဘဲ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဆင်ပြေလွယ်ကူချောမွေ့စွာ သွားလာနိုင်ပါပြီ။မီးပွိုင့်များလည်း လမ်းမကြီးများမှာ တပ်ဆင်ထားလို့ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုနဲ့ ယာဉ်အန္တရာယ်မစိုးရိမ်ရဘဲ ဘေးကင်းစွာ သွားလာနိုင်သလို ၂၄နာရီပတ်လုံး လျှပ်စစ်မီးများသုံးစွဲနိုင်တာကြောင့် မီးဘေးအန္တရာယ်အတွက် ရဒတ်အေးရပါတယ်။
Posted by San Yin Mon at 9:17 AM No comments:
I visited to Canada from August to September 2018. I travelled many places so I uploaded some of the photos and videos that I took by my 📱 phone.
Posted by San Yin Mon at 10:02 AM No comments:
Posted by San Yin Mon at 9:11 AM No comments:
ပရိုတိန်းနဲ့ အိုမီဂါ၃ဖက်တီးအက်ဆစ်ကြွယ်ဝတဲ့ ကြီးမားပြီး စားသုံးနိုင်သောအစေ့မျိုးထုတ်ပေးတဲ့ အပင်ကတော့ Plukenetia volubilisမျိုးရင်းဖြစ်တဲ့ ကြယ်ပဲခေါ်Sacha Inchiပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပီရူးနိုင်ငံစိုက်Sacha inchiကို Sacha peanut၊ Jungle peanut(သို့မဟုတ်) Inca peanutလို့ အမျိုးမျိုး ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ အာဟာရဓါတ်များတဲ့အဆိုပါအစေ့ကို မကြာခဏ လှော်စားကြသလို၊ ပရိုတိန်းအမှုန့်(Protein powder)နဲ့ ကောက်နှံcerealsအသွင်(သို့) ဟင်းချက်ဆီ(cooking oil)နဲ့ ဖြည့်စွက်စာ(Supplement) အသွင်ဖြင့် ဈေးကွက်ထဲမှာ အလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
Posted by San Yin Mon at 11:05 AM No comments:
အမျိုးအစားအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့သေချာစွာမသိရှိ၊ မကြားဖူးသေးတဲ့ ဆေးဝါးပညာရှင်၁၂မျိုး ခွဲခြားထားပါတယ်။ နည်းပညာတိုးတက်မြင့်မားတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ Pharmacistsတွေဟာ ဘယ်အခန်းကဏ္ဍမှာ ဘယ်လိုအထူးပြုပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကို အဆိုပါဗီဒီယိုက အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြသထားပါတယ်။
Posted by San Yin Mon at 4:08 AM No comments:
Announcement - Dear readers, It have been almost3years since I posted the last post in my blog. As you all know, blogger is no longerapopular social media anymore,so ...